RASMI: Quique Setién Oo Ku Dhawaaqay Liiska Ciyaartoyda Barcelona Ee Kulanka Adag Ee Valencia. - Gool24.Net
Tababaraha kooxda Barcelona ee Quique Setién ayaa ku dhawaaqay liiska ciyaartoyda kooxdiisa ee kulanka adag ee Valencia waxaana soo laabtay xidigihii muhiimka ahaa ee la nasiyay kulankii Copa Del Rey ee Ibiza.
Barcelona ayaa u safraysa kooxda Valencia oo ay dhamaadkii xili ciyaareedkii la soo dhaafay guuldaro kala kulmeen finalkii Copa Del Rey, wuxuuna Quique Setién mari doonaa imtixaankiisii ugu horeeyay ee Barca.
Lionel Messi, Gerard Pique, Sergio Busuets iyo xidigihii uu Setien nasiyay kulankii Copa Del Rey ayaa dib loogu yeedhay maadaama oo kulanka Valencia uu yahay mid adag oo ay Barca xaalad adag mari doonto.
Arthur Melo ayaa rajaynaya in uu si buuxda uga soo kabsaday dhaawicii uu ku maqnaa oo uu markii ugu horaysay horyaalka La Liga ku soo bilaaban doono muddo uu dhaawac ku maqnaa kadib laakiin waxa uu sugayaa go’aanka Setien.
Laakiin Ousmane Dembele ayaa wali ka sii maqan Barcelona si la mid ah Luis Suarez oo muddo dheer garoomada dhaawac uu qaliin u maray ku seegaya.
Liiska Ciyaartoyda Barcelona Ee Kulanka Valencia